Python: mitauro inogona zvakare kuvhurwa sosi | Linux Vakapindwa muropa
Python: mitauro inogona zvakare kuvhurika sosi
Iko kune kuwanda kwemitauro yekuronga, mimwe yacho inozivikanwa uye inoshandiswa, sezvazviri nyaya ye Python. Mutauro wakadudzirwa, uye zvakare zvakareruka kudzidza, kunyange hazvo isiri yekukurumidza. Mutauro wekuronga uyu unoshandiswa kugadzira akasiyana mafomu uye munguva pfupi yapfuura iri kushandiswa zvakanyanya kugadzira zvinyorwa zvekupa masystem kana kubiridzira Asi izvi handizvo zvatiri kuda kutaura nezvazvo muchinyorwa chino, kunyangwe Python ari mumwe wevanopokana venhau ...
Python yakagadzirwa ne Guido van Rossum mumakore makumi masere apfuura kuti vabudirire mutauro weABC. Zita remutauro uyu wekuda kuziva unobva kuMonty Python, iro rinozivikanwa boka revatambi veBritish. van Rossum vaida kuburitsa kodhi yechirongwa ichi chavainge vachiita uye ndiwo marongero akaita mutauro wepurogiramu nhasi wakawanda munharaunda. Izvozvi ichinjika-chikuva uye inotarisirwa pasi pePython Software Foundation. Kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti unogona kurodha dzakasiyana dzakasiyana dzayo uye uwane zvinyorwa.
Kana iwe uchiri kusaziva maitiro ekuronga kana uri kutanga, ndinokurudzira Python, nekuti hausi mutauro wakaoma. Uye nenzira, rezinesi rinoburitswa mutauro uyu rakakosha rakadanwa Python Software Foundation Rezinesi, Inoenderana neGNU GPL senge vhezheni 2.1.1, kunyangwe isingaenderane nedzimwe shanduro dzekare. Uye kutaura nezve iyo Python Software Foundation, kutaura kuti hwaro hunove nebasa rekugadzirisa nekusimudzira mutauro wepurogiramu.
Iyo isiri-purofiti sangano. Iyo PSF yakaumbwa muna 2001 uye yakangozvipira kune manejimendi (kusimudzira, manejimendi kodzero, kuwana mari yezvehupfumi kuti ienderere mberi nekushanduka, nezvimwewo) chirongwa ichi kubva ipapo, icho chave kuvandudzwa nekuda kwenharaunda. Uye pakupedzisira, ndinoda kutaura kuti pakati peshanduro dzakasiyana pane iyo Python 2.x uye Python 3.x, iyo yekupedzisira ine akasiyana novelties. Uye zvakare, kuiswa kwakadai seCPython, IronPython (yakagadzirirwa NET), isina Stack Python (CPython isina C stack), Jython (yakaitwa muJava), Pippy (yePalm), PyPy (yakagadziridzwa neJIT) uye ActivePython (inobata pamwe nekuwedzera. ).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Python: mitauro inogona zvakare kuvhurika sosi
Maitiro ekuita Fedora kuisa pane komputa yedu